अमेरिका बस्ने एक मात्र बहादुरी ब्यक्ती जस्ले हालेका थिए प्रचण्ड बिरुद्द उजुरी,जान्नुहोस् वास्वतिकता - KTMreports.com
अमेरिका बस्ने एक मात्र बहादुरी ब्यक्ती जस्ले हालेका थिए प्रचण्ड बिरुद्द उजुरी,जान्नुहोस् वास्वतिकता
KTM reports २२ चैत्र २०७५, शुक्रबार १९:१३ 298 पटक हेरिएको
काठमाडौं, २२ चैत । पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिकाको मेरिल्यान्ड पुगेका बेला त्यहाँको संघीय अनुसन्धान विभाग (एफबीआई)लाई प्रचण्डविरुद्ध इमेल लेखेका भनिएका प्राध्यपक तिलक श्रेष्ठले मुख खोलेका छन् । ४० बर्षदेखि अमेरिकामा रहेका उनले दैनिक नेपाललाई एउटा पत्र लेखी ७ बुँदामा आफ्ना विचार राखेका छन् । उनले एफबीआईमा प्रचण्डविरुद्ध इमेल लेखेको तर अदालतमा उजुरी नगरेको स्वीकार्दै यस विषयले यति धेरे चर्चा पाउला भन्ने नलागेको पनि खुलाएका छन् ।
तर, उनले माओवादी युद्धलाई पटक–पटक आतंककारीकै संज्ञा दिएका छन् । यसको नजिर अमेरिकाले नै आतंककारी भनी आधिकारीक घोषणा गर्नु रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
श्रेष्ठले के–के लेखे ?
म एक साधारण नागरिक हुँ नेता र अभिनेता जस्तो प्रचारबाजी चहान्न । म शाकाहारी र गान्धी जीवन मान्ने व्यक्ति हुँ ।
हाम्रो जन्मभूमीमा कति समस्या छन् र कतिपय जारी छन् । म विश्वासका साथ भन्छु हामीले यस विषयलाई अब धेरे गर्न हुन्न भनौं । हाम्रो कर्तव्यलाई सम्झौं ‘कर्मण्ये बधिकारस्ते मा फलेसु कदाचन’ । आफ्नो कर्तव्य कुनै आशा नराखी गरौं भन्ने कृष्णको भनाई सम्झौं ।
म स्याटेलाइन रिमोट सेन्साइनमा शोध गरिरहेको विज्ञानको विद्यार्थी हुँ । उनले बुँदागत रूपमा आफ्ना विचार राखेका छन् ।
१. सन् १९९० देखि हामीकहाँ प्रजातन्त्र थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा नै संविधान बनेको थियो । यसमा नागरिकका अधिकारका विषयमा सबै उल्लेख थियो ।
२. बलका भरमा कम्युनिस्ट शासनका लागि माओवादीले सन् १९९६ मा प्रजातन्त्रविरुद्ध आन्दोलन थाले । शान्तिपूर्ण हिसाबले उनीहरूले धारणा राख्न सक्ने थिए, संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो । तर उनीहरूले आतंकवादी बाटो अपनाए । राजनीतिक मुद्दाका नाममा आतंकवादी गतिविधि बढ्यो । त्यो आतंकमा १७ हजार गरिब नेपाली मारिए । कल्पना गरौं, ति परिवारले भोगेको वेदना र ध्वस्त भए संरचनासहित आर्थिक अवस्थाको बारेमा सोचौं । आज ५० लाख गरिब नेपाली विदेशमा शरिर र आत्मासँगै काम गर्न विवश छन् ।
३. माओवादी आतंकले हाम्रो हरेक चिजमा आक्रमण गरेको थियो । मन्दिर भत्काइए, बाहुनदेखि अनेकलाई गाइको मासु खुवाइयो । यस्तो चिज माक्र्सवाद हो त ? हाम्रो आत्मसम्मान र परिचय भत्काउने भन्दा के काम भयो त ?
४.विभिन्न जातीय र धार्मिक समुदायलाई राष्ट्रवादको नाममा माओवादीले ‘मिसगाइड’ गरेको थियो । १२५ जातीको २ करोड ७ लाख मानिसलाई यसले कति प्रभाव पारेको थियो ?
५. अन्तरिम संसदमा ३० प्रतिशत निर्वाचनभन्दा बाहिरबाट आएका माओवादी थिए भने ७० प्रतिशत निर्वाचित सांसद थिए । राजनीतिक सम्झौता प्रजातन्त्रभित्र होइन, प्रजातन्त्रमुनि हुनुपर्छ । ७० प्रतिशत प्रजातन्त्रको हरण त्यहिँ भएको थियो । एउटा प्रश्न उठ्छ, के राजनीतिक दललाई त्यसो गर्ने म्यान्डेट थियो त ?
६.माओवादीले धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको कुरा गरे । तिनीहरूले नागरिकसँग यो विषयमा छलफल गरेनन् भने कुनै म्यान्डेड पनि पाएका थिएनन् । अब नागरिकलाई यो विषयमा निर्णय गर्न दिऔं भन्ने पनि ठानिएन ।
७.सन् २०१५ मा भएको संविधानसभाको चुनावमा नागरिकले दिएको जनमतलाई हेरौं । यो संविधानका लागि नागरिकले दिएको अभिमत थियो । म यो विश्व नै परिवार भनी ठान्ने मान्छे हुँ । सर्वे अपि सुखिनो सन्तुको विचारमा हिँड्ने मान्छे हुँ । यसैकारण पनि अमेरिकामा एउटा भनाई छ– नराम्रोपनले त्यतिबेला जित्छ जतिबेला राम्रा व्यक्तिले केही गर्दैनन् । यदि हामी नेपाल आमालाई माया गछौं भने हामीले अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यो जुनसुकै रुपमा होस् ।